१२ बर्षको बा’लकले, ३४ बर्षिया शि’क्षिकाला’ई ग’र्भवती ब’नाएपछि ! – Life Nepali
१२ बर्षको बा’लकले, ३४ बर्षिया शि’क्षिकाला’ई ग’र्भवती ब’नाएपछि !
तपाईलाई सुन्दा पनि अ’चम्मै लाग्न सक्छ एक विधालयको विधार्थी र शिक्षिका प्रे’ममा पर्छन् र १२ बर्षका बालकले ३४ बर्षकि शिक्षिकालाई ग’र्भवती बनाउँछन् । तर यो घ’टना सत्य हो । यो घ’टना सन् १९९६ मा अमेरिकामा भएको हो । त्यस समय अमेरिकामा एकजना शिक्षिका निकै चर्चामा थिइन् । ३४ वर्षकी ती महिलाको नाम मेरी हो । उनी एक विद्यालयमा पढाउँथिन् । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
उनले पढाउने स्कुलमा एकजना १२ वर्षीय छात्रले पढ्थे । उनको नाम विली हो । मेरी र विलीबीच यतिधेरै सा’मिप्यता कायम भयो कि उनीहरु ए’कअ’र्काको प्रे’ममा प’रे । उनीहरुबीच यौ’न स’म्पर्क पनि भ’एछ । झण्डै एक वर्षसम्मको शा’रीरिक स’म्पर्कमा रहेका उनीहरुका विषयमा गा’इँगुइँ चल्न थाल्यो । उनीहरुको स’म्बन्ध अ’वैध थियो ।
त्यसैले ना’बालिग सँग अवै’ध स’म्बन्ध का’यम गरेको आरोपमा मेरीलाई पु’लिसले प’क्राउ गर्यो । उनलाई जे’ल स’जायँ पनि भयो । तर जे’लमा अ’नौठो घ’टना घ’ट्यो । उनले जे’लभित्रै बच्चा ज’न्माइन् । वास्तवमा उनको पेटमा विलीसँगको यौ’न स’म्पर्क बाट बच्चा ज’न्मिएको थियो । बच्चा जन्मिएपछि उनलाई जे’लमुक्त गरियो नि’गरानीमा रहने गरी ।
तर जे’लमुक्त गर्ने बेलामा अदालतले उनलाई सख्त आदेश दिएको थियो, प्रेमी विलीसँग कहिल्यै पनि भेट गर्न नपाउने । तर जेलबाट निस्किने बित्तिकै विलीले अदालतको आदेशको खि’ल्ली उ’डाउन थालिन् । उनी एकपटक विलीसँग कारभित्र आ’पत्तिजनक अ’वस्थामा रहेको बेला प’क्राउ परिन् । त्यसपछि उनलाई सात वर्षको जे’ल स’जाय भयो ।
रोचक कुरा त के भने त्यो बीचमा उनी फेरि ग’र्भवती भएकी थिइन् । उनले जेलमै दोश्रो बच्चा जन्माइन् । यसपटक भने उनलाई पूरै ७ वर्षको स’जाय का’टेपछि मात्र जेलमुक्त गरियो । सन् २००४ मा जे’लमुक्त भएसँगै मेरी पुनः विलीसँग स’म्बन्ध कायम गर्न थालिन् । जब विलीको उमेर २० वर्षको भयो र कानूनी रुपमा विहेका लागि योग्य बने तब विली र मेरीबीच वैधानिक रुपमा बिहे भयो ।
त्यतिबेला मेरी चाहिँ ४२ वर्षकी थिइन् । बिहेअघि नै उनीहरुका दुईवटा बच्चा जन्मिसकेका थिए । मेरी जे’लमा रहेको बेला विलीकी आमाले ती दुवै बच्चाको हेरचाह गरेकी थिइन् । बिहेपछि मेरीले थप दुई सन्तान जन्माइन् । अहिले मेरी र विली आफ्नो पूरै परिवार सहित वाशिंटनमा बस्दै आएका छन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा विली र मेरीले आफ्नोजस्तै स्थितिमा न’फस्न आफ्ना बच्चाहरुलाई स’चेत गराएका थिए ।एजेन्सीको सहयोगमा । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous ३४ बर्षिया शि’क्षिकालाइ, १२ बर्षका बा’लकले ग’र्भवती ब’नाएपछी !
Next कलेज मा यी दुई जो’डिले यस्तो ह’र्कत गरे पछि भिडि’यो भयो भा’इरल (हेर्नुहोस भिडियो)